Nezvedu - Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd.
Isu tinoomerera pahunhu hwemhando ye "Hupenyu hupenyu hwedu, Mukurumbira izveramangwana redu, Kugutsikana ndiko kutsvaga kwedu, Kuvandudza chinangwa chedu", uye vimbiso yekupa yakanakisa zvigadzirwa kumutengi wedu.
Hebei Joyroll Conveyor Machinery Co., Ltd.yakagadzwa muna 2008, inyanzvi inogadzira bhandi rinotakura uye zvikamu. Fekitori yedu iri mu feixiang maindasitiri paki, handan guta, hebei dunhu, China, kufukidza 33000 mativi metres. Fekitori yedu ine yepasirose yepamberi otomatiki conveyor idlers roller yekugadzira mutsara, vane advanced electrostatic poda yekumhanyisa yekugadzira tambo, uye izere renji yekutakura idlers roller yekuyedza michina, yegore yekugona kugona 600,000 pcs conveyor idler roller. Tinogona kuburitsa Chinese yakajairwa TD75 mhando uye DT II mhando roller, zvakare inogona kuburitsa idler roller maererano neyakajairwa nyika dzese, senge DIN, AS, JIS, CEMA, SANS-SABS, GOST, AFNOR, nezvimwe zvedu. kutenderera kushora, humbowo hweguruva, humbowo hwemvura, ruzha rwakaderera, kutenderera mushe, kuchengetedza simba, sevhisi yakareba pamusoro peawa zviuru makumi mashanu.
Joyroll yekugadzira tekinoroji chikamu uye mhando chigadzirwa chakawana kuzivikanwa kwevatengi kumba nekune dzimwe nyika, zvigadzirwa zvinoshandiswa zvakanyanya mumarasha, kuchera, zviteshi, kuvaka, zvigayo zvesimbi, magetsi emagetsi uye mimwe minda, uye kutumirwa kuGerman, Australia, Russia , South Africa, Brazil, Indonesia uye zvichingodaro, nyika dzinopfuura makumi mashanu nematunhu.